Mpianaka maty tao Ikalamavony Lehilahy iray naiditra am-ponja vonjimaika
Niakatra fampanoavana omaly ilay lehilahy voarohirohy tamin’ny famonoana ny raim-pianakaviana nitory noho ny famonoana an-janany.
Raha ny fampitam-baovaon’ny zandary ao amin’ny borigadin’Ikalamavony, ny ao amin’ny kaompanian’i Fianarantsoa no nandray an-tanana ny raharaha. Ny resaka nifanaovana tamin’ny komandan’ity farany no nahalalana fa efa notanana am-ponja vonjmaika ao Fianarantsoa io olona io. Noho ny halavitry ny lalana sy ny fidirana alina teo amin’ny renivohitry ny Faritra Matsiatra Ambony afak’omaly dia omaly alarobia vao niakatra fampanoavana.
Raha iverenana ny tantara, hita faty teo akaikin’ny EPP Tanambao Avaratra, ao Ikalamavony i Dariera ny sabotsy teo. Nisy namono tamin’ny fomba feno habibiana ity raim-pianakaviana sahabo ho 42 taona ity. Vao tapa-bolana mahery kely lasa izay no nisy namono ihany koa ny zanany ka nampiakatra fitsarana ny raharaha izy. Voasambotra tamin’ny nahafaty ny zanany ny lehilahy teo an-tanàna izay niara-nisotro ny 10 jolay teo ka nanindrona antsy an’io tovolahy io. Nosamborin’ny fokonolona avy hatrany io lehilahy nahavanon-doza io ary natolotra ny zandary. Nametraka fitoriana ihany koa anefa ny raiben’ilay tovolahy izay voasaringotra ka samy niaka-nidina teo ny raharaham-pitsarana ary izao niampy tranga hafa izao indray.